कविताको प्रभाव | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 09/24/2011 - 21:01
स्कुलबाट ज्यादा छुट्ट िमिलाउन सकिन्नथ्यो । केवल दुई दिनमा यो यात्रा पूरा गर्ने कार्यक्रम बनाएँ मैले । बरेलीमा कविसम्मेलन हुने रातको बिहान नै म ईलाहाबादबाट हिँडेर प्रतापगढ पुगेँ । त्यहाँबाट १० बजे पञ्जाब मेल पाइन्थ्यो, जसले साँझसम्ममा बरेली पुर्याइदिन्थ्यो । स्टेसनमा केही विद्यार्थीहरू मलाई लिन आएका थिए । एक नवयुवक अग्लो, दुब्लो, गोरो, टाइबिनाको कोट र प्यान्ट लगाएको-हुर्रिंदै मतिर आयो र भन्यो-'तपाईं नै बच्चनजी हो ?' र मैले म नै हुँ भनेपछि उसले मेरो हात समात्यो र समातिरह्यो । अनि भन्दै पनि रह्यो -''बच्चनजी, तपाईं आउनु भयो ! मेरो जीवनको कत्रो ईच्छा पूरा भयो भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा छैन । आज म तपाईंको मुखबाट कविता त सुन्न चाहेकै थिएँ । आज तपाईं नआउनु भएको भए म जिन्दगीलाई कहिल्यै माफ गर्दिन थिएँ......."-अरू पनि कुन्नि के के भन्दै गयो र म चाहिँ मेरो कविताको मोह गर्ने यस्तो मान्छे पनि रहेछ भनी सोच्दै रहेँ ।
टाङ्गामा पनि ऊ मसँगै बस्यो, पटकपटक मेरो हात समात्दै रह्यो र बाटोभरि म आएको हुनाले खुसी र मेरो कविता सुन्नका लागि व्यग्र भएको भनाइ व्यक्त गरिरह्यो । यसलाई सायद मेरो सबै प्रकाशित कविताहरू सम्झना थियो । बीच-बीचमा ऊ मलाई मेरा कविताका पङ्क्तिहरू सुनाउँथ्यो, आग्रह गर्थ्यो-'मधुशाला'को फलानो फलानो रुवाइहरू, मधुबालाको फलानो कविता, फलानो पत्रिकामा प्रकाशित फलानो गीत तपाईं जरुर सुनाउनोस् । ती मेरालागि नै लेखिएका हुन् । आज तपाईं मेरो कुरा मान्नुहोस् । जुनजुन मैले भनेँ नि त्यही सुनाउनोस् । म तपाईंको यस उपकारलाई जिन्दगीभरि बिर्सने छैन ।"
मलाई बरेली केवल चार घण्टा मात्र बस्नु थियो । मेरो सामान कलेजकै कुनै कोठामा राखिदिएका थिए । नुहाउने, तयार हुने, खाना खाने काममा मलाई एक घण्टाभन्दा बढी समय नै लाग्यो । म कलेजको हलमा पुगुञ्जेल कवि सम्मेलन भएको दुई घण्टाभन्दा ज्यादा भइसकेको थियो र मेरै प्रतीक्षा भइरहेको थियो । मञ्चमा जनार्दन झा 'द्विज' देखेको सम्झना छ मलाई । 'दिनकर' को उदय हुनअघि मोहनलाल महतो 'वियोगी' र 'द्विज' बिहारका सबभन्दा ठूला कवि भनेर चिनिन्थे । कहिलेकाहीँ उहाँहरूसँग केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' को नाम पनि लिइन्थ्यो । मैले त्यहाँ दुई घण्टासम्म कविता वाचन गरेँ । बरेलीको कुनै पनि कवि सम्मेलनमा यो मेरो पहिलो कविता वाचन थियो । मेरो कविताको प्रभाव अरू ठाउँमा हुने जसरी नै त्यहाँ पनि भयो । सबले एक व्यक्तित्वपूर्ण स्वर सुने, हिन्दी कविताको एक नयाँ शैली देखे र भावहरूको एक नयाँ उथलपुथल अनुभव गरे जसमा पीडाको उत्कटता पनि थियो, उल्लासको तीब्रता पनि थियो ।
टाङ्गामा मसँगै बसेर आएको युवक दर्शकहरूको बीचबाट बाटो बनाउँदै आएर मेरो ठ्याक्कै अगाडि बस्न आयो । उसको भावमुद्राले म यतिधेरै प्रभावित भएँ कि, लाग्थ्यो म केवल ऊ एक जनालाई मात्र कविता सुनाइरहेको छु । ऊ एक जनाले मात्र मेरा शब्दशब्दलाई आत्मसात गरिरहेको छ । उसले जुनजुन कविता भन्यो, मैले त्यहीत्यही सुनाएँ । त्यस कविता वाचनको समाप्ति मैले 'पाँच पुकार' बाट गरिदिएँ, जसको अन्तिम अंश यस्तो छ ः
लो, 'चलो, चलो' की बोली !
सब टाउको निहुर्याएर गए इच्छाका पोकाहरू-बोकेर । मदिरालयभरि गुञ्जियो- ल 'हिँड, हिँड' को आवाज ।
कवि सम्मेलनबाट म सीधै स्टेसन गएँ । केही विद्यार्थी र अभिभावकहरू मलाई पुर्याउन आए । सँगसँगै अघि मैले माथि कुरा गरेको युवक पनि थियो तर यतिखेर उसको त्यो साँझको खुसी कुन्नि कहाँ हराइसकेको थियो । ऊ यस्तो लाग्थ्यो आफूआफूभित्रै डुबेको थियो । जस्तो कि म-कवि सम्मेलनपछि मलाई सधैँ नै एक विशेष एकान्तपनाको भावनाले घेरिराखेको हुन्छ । रेल आएर म डिब्बामा बस्नै आँटेको बेला त्यो युवक फेरि म कहाँ आयो । आफ्ना अलि द्रबित ठूलाठूला आँखाले मलाई हेर्दै बडो जोरसित मेरो हात समात्यो । उसका ओठहरू केही भन्न चाहिरहेका थिए तर भन्न नसकेझैँ मन्दसित चले । अन्त्यमा केवल यति भन्यो उसले- ''म पनि यही गाडीबाट जाँदैछु । फलानो ठाउँ जानु छ ।"-कुन स्टेसनको नाम लिएको थियो, मैले बिर्सें र ऊ गएर अगाडिको डिब्बामा बस्यो । उसले कुनै सामान पनि ल्याएको थिएन ।
मैले सुत्ने ठाउँ भेट्टाइसकेको थिएँ-दिनभरिको यात्रा, रातिको कविता वाचनले गर्दा शरीर र मनबाट थकित म निदाइहालेँ । करिब चार बजे डिब्बाका अरू यात्रुहरूको हल्ला सुनेर अचानक म ब्यूँझे । टाढा देखिएका बत्तीहरू देखेर रेल कुनै सानो स्टेसन हुँदै आएर रोकिएको थियो भन्ने थाहा भयो । कोही एक जनालाई रेलले किचेको रहेछ र मानिसहरू आ-आफ्ना डिब्बाबाट ओर्लेर उसलाई हेर्न जाँदै थिए । केही र्फकंदा कुरा पनि गर्दै थिए-"जवान रहेछ मान्छे त....कुनै सहरीया...कर्मको लेखा.....यस्तो अँध्यारोमा कहाँ लाइनमा आएछ....जसको मृत्युको जहाँका लागि लेखिएको हुन्छ, मान्छे त्यहीँ पुगिहाल्छ....मर्ने त मरिहाल्यो, गार्ड ड्राइभरले रिपोर्ट दिन्छ अब...।"
फेरि एउटा प्रश्न मेरो गालामा थप्पड बनेर प्रहार भयो-"के उसको आत्महत्याका लागि तेरो कविता उत्तरदायी छ ?"
बाँकीको यात्रा बडो बेचैनीका साथ गरियो । मन त्यस युवकको जीवनका किसिमकिसिमका दुःखद र दुःरुह परिस्थितिहरूको कल्पना गर्दैरह्यो तर सारा कल्पनाहरूले आफ्ना कविताहरूले उसका भावनाहरूलाई गिजोल्यो र ऊ जीवनदेखि विरक्त भएर मृत्युको पाङ्ग्रामुनि आफूलाई समर्पित गर्यो भन्ने वास्तविकता देखाउँदै मलाई चिर्दै गयो । एक प्रकारको अपराधभावले मेरो छातीलाई अँठ्याउन थाल्यो । दिनमा सयौँपटक यस प्रकारको प्रश्न मेरो मनमा आउँथ्यो- "के त्यस युवकको आत्महत्याका लागि मेरो कविता उत्तरदायी थियो ? के मेरो कविताले मानिसहरूलाई जीवनबाट निराश पारिदिन्छ ? के मेरो कविताले जीवनको कुनै विकृत चित्र प्रस्तुत गर्छ ? एक शब्दमा - के मेरो कविता 'मर्बिड' हो ? 'मर्बिड'को अर्थ हो-विकारग्रस्त, रोगाक्रान्त, अस्वस्थ, अस्वाभाविक ।"
-यो अंश हरिवंश राय बच्चनको चार भागमा प्रकाशित आत्मकथामध्ये 'नीड का निर्माण फिर'बाट लिइएको हो ।